Dood cilmiyeed looga hadlayay xiriirka ka dhaxeeya waalidka iyo macalinka oo maanta Muqdisho lagu soo gabagabeeyay
Wajiga 3aad dood cilmiyeed looga hadlayay xiriirka ka dhaxeeya waalidka iyo Macalinka ayaa maanta lagu soo gaba gabeeyay magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo qeyb galeen Culumaa'udiin, Macalimiin iyo waalidiin.
Dood cilmiyeedka ayaa ka qeyb galayaasha uga hadleen doorka macalinka kaga aadan tarbiyenta caruurta iyo sidii diinka si toos ah u bari lahaa, iyadoo lagu dhaqamayo Sunada Rasuulka CSW, waxaana dooda aheyd mid saraaxad leh oo ka qeyb galayaasha fikrado isku weydaarsadeen
Hey'adda CCD oo bulshada u qabata kulamada qeybaha bulshada, sida wacyi gelinta, aqoon is weydaarsiga iyo ka shaqeynta nabada iyo is dhex galka bulshada ayaa ahaa dood cilmiyeedkii 3aad oo ay u qabato waalidiinta iyo macalimiinta.
Sheekh C/qaadir Sheekh Maxamed Soomow oo ugu horeyn furay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in xiriirka ka dhaxeeya Waalidiinta iyo Macalinka, xilli fiican uu soo maray, isla markaana macalinka xushmad gaar uu lahaa, waxaana uu soo qaatay sida macalinka loogu abaal marin jiray marka Diinka uu baro Ardayga.
"Macalinka waxaa lagu xumeyn jiray qaalin lo' oo qalin jebin ahaan loo siin jiray, marka diinka uu baro ardayga, laakiin hada taas ma jirto, macalinka waa la karaama tiray, wuxuu ahaa macalinka aabihii labaad, waxa Soomaaliya ay ka halawday waxaa ugu weynaa xiriirkii u dhaxeeyay Macalinka iyo waalidka oo lumay"ayuu yiri Sheekh Soomow.
Sheekh Axmed Shuqul ayaa isna sheegay in Soomaaliya waxa ugu weyn ay laheyd uu ahaa Diinka iyo Caruurta, hase ahaatee maanta intii la bedelay, waxaana uu xusay inay soo baxeen macalimiin diinta bedelay oo caruurta marin habaabinaya.
"Hada waxaa soo baxay Macalin ku sheeg ilmaha lagu aaminaya si qaldan diinta u baraya, ardaydii ama ilmihii waxaa la baray wax aysan dhaqan u laheyn, sida in Dugsiyada qori lagu baro, in dadka la qarxiyo, waa in waalidiinta ka feejignaadaan"ayuu yiri Sheekh Axmed Shuqul.
Sheekh Maxamed C/raxmaan ayaa khudbad dheer oo diini ah uga hadlay waajibaadka macalinka ka saaran ardayga, isagoo xusay in macalinka yahay waalidka labaad, waxaana uu ka xumaaday in ardayda loo dhiibo ay baraan in wax aan raad ku laheyn Diinta Islaamka iyo Sunada Rasuulka.
Waxaa kaloo ka hadlay dood cilmiyeedka Sheekh Muuse Cagaweyne oo xusay in waalidka looga baahan yahay in caruurta uu si gaar ah ula socdo, kuna koontaroolo duruusta loogu soo dhigayo Dugsiga.
Sidoo kale waxaa u hadlay Waalidiinka Sheekh Maxamed Cabdi Ibraahim oo sheegay in la sameeyo dalad isku xirta macalinka iyo waalidka, si ubad toosan loo helo, oo aan loo adeegsadin inuu wax qaribo.
Ugu dambeyn dood cilmiyeedkan ayaa ahaa mid ku soo gaba gaboobay jawi wanaagsan, waxaana lagu amaanay Hey'adda CCD ee soo qaban qaabisay dood cilmiyeedka looga hadlayay xiriirka ka dhaxeeya waalidka iyo macalinka.